Uphika eyokuba namatekisi owakwaMetrorail | IOL Isolezwe
Uphika eyokuba namatekisi owakwaMetrorail
Isolezwe / 5 February 2013, 10:23am / BONISWA MOHALE
DURBAN130506 U Langalakhe Zwane emukela isitifiketi kumphathi wakwa Metrorail ethekwini u Sisa Mtwa emncimbini obuse Suncoast Casino.
USESABELA ukuphepha komndeni wakhe ongumxhumanisi womphakathi noMetrorail kulandela ukuthola izinsongo zokusatshiswa emuva kwesigameko sokushiswa kwezitimela esiteshini sakwaMnyandu, eMlazi ngoLwesine ngoba esolwa ngokuthi umemezela okungeyikho ngezikhathi zokuhamba kwezitimela.
Abagibeli bezitimela bagxeka uMnuz Langalakhe Zwane ngokuthi uphambanisa izikhathi zokuhamba kwezitimela ukuze abagibeli bathutheleke ematekisini njengoba bethi naye unamatekisi.
Izolo uZwane odume kakhulu ngelikaMangethe emisakazweni ubezwakala ukuthi uthukile ngesikhathi ememezela ukuhamba kwezitimela emsakazweni uKhozi FM ohlelweni iVuka Mzansi olushayelwa wuLinda Sibiya. UZwane uthe akanawo yena amatekisi kodwa ungumsebenzi nje wakwaMetrorail.
Uthe kusuke kungekho abangakwenza bewuMetrorail ngokubambezeleka kwezitimela ngoba yibo abantu abantshontsha ikhopha emizileni yezitimela.
“Namanje izitimela zingemuva kwesikhathi ngoba ngabafowenu nomalume benu abenza lokhu,” kusho uZwane obelokhu ekhale njalo ngokuthi yena ungumuntu ovulelekile kuwona wonke umuntu, akanazo izitha.
Isolezwe lithole ukuthi ngoLwesihlanu kwafika abantu abathile emzini wakhe behamba ngetekisi bambuza endodaneni yakhe kodwa ngenhlanhla wayengekho ekhaya esemsebenzini. UZwane kuthiwa osekumfaka kakhulu uvalo wukuthi uma sekuzoba nabantu angabazi abamfuna ekhaya uzithola engasaphephile.
UNkk Thandi Mkhize oyisikhulu sezokuXhumana kwaMetrorail, uthe inkinga yokungafiki ngesikhathi kwezitimela ayidalwa nguZwane ngoba naye ungumsebenzi wale nkampani, akanawo amandla okumisa izitimela ukuze zifike sekwedlule isikhathi.
“Kunohlu olunikezwa uZwane olushoyo ukuthi isitimela esithile sizofika ngasikhathi sini. UZwane akuyena owenza ukuthi izitimela zifike sekwedlule isikhathi kodwa okwenza lokho yizimo ezingaphezu kwamandla ethu, engingabala kuzo ukwebiwa kwamakhebuli, ukubekwa kwezinto emzileni wesitimela nokuntshontshwa kwezinsimbi,” kusho uNkk Mkhize.
Uthe akusiyena uZwane kuphela umsebenzi wabo osethola ukusatshiswa ngabagibeli, nabashayeli bezitimela sebephoqeleka ukuba bahambe nonogada baphinde bathembele nasemaphoyiseni asebenza eziteshini zezitimela.
“Sicela babekezele abagibeli, bangamoshi impahla ngoba uma izitimela zingasebenzi kuphazamiseka wonke umuntu. NgoLwesine kwaphazamiseka nabantu abagibela amabhasi ababelethelwe wona ngenxa yokuthi kwayiwona ayejikijelwa ngamatshe.
“Sicela babike bonke ubugebengu nokungeneliseki kwabo ku-0800 336868,” kusho uNkk Mkhize othe zonke izikhalo zabagibeli ziyalalelwa bese kulungiswa okonakele.
Uthe badumele kakhulu ngesehlakalo sangoLwesine lapho bathola abagibeli sebekikiza ngesikhathi kushiswa izitimela.
Unxuse abantu ukuba bababekezele ngoba sebezoba nezitimela ezintsha maduze kodwa lokhu akusho ukuthi abamoshe ezikhona njengamanje.